Mpanao aferana boaderozy Hogadraina any Nosy lava…
Fifanolanan’ny Air Madagascar sy Air France Hisy fanadihadiana atao amin’ny 2 jolay
Hisy ny fanadihadiana atao amin’ireo voakasika ny 2 jolay izao mba hamahana ny olana ifandroritan’ny kaompania Air Madagascar sy ny Air France.
Fanendrena ny Tale jeneraly vaovaon’ny BIANCO Efa any am-pelatanan’ny filoha ireo anarana 3
Efa nalefa any amin’ny filoham-pirenena ny 2 jona lasa teo ny anaran’ireo olona 3 hisafidianany ka tendrena ho tale jeneralin’ny birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (Bianco)
Jhonny Rakotoarisoa « Tsy maty izany aho »
Niely ny tsaho fa maty voatifitra tany Mahereza ny tenako raha namonjy voka-dehiben’ny fiangonana tany, hoy ny kandida ho depiote tao amin’ny distrikan’Ambohidratrimo farany teo, Jhonny Rakotoarisoa.
Gasy Youth Up Manatsara ny lenta sy ny fahaiza-manaon’ny mpiasan’ny CUA
Hifarana anio zoma 14 jona ao amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely rehefa naharitra roa andro, ny “team building project” na fanatsarana ny fahaiza-manaon’ireo mpiara-miasa eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Kaominina Talatamaty Nitondra am-bavaka ny firenena
Nitondra am-bavaka ny firenena ny kaominina Talatamaty, ny alarobia hariva teo, tao amin’ny Ekar Faralaza.
Mitaintain-dava ny vahoaka Mitombo isa ireo miaramila tsy voafehy…
Raharaha mafampana ny mombana miaramila miisa 34 naiditra am-ponja vonjimaika noho ny fahafatesana sivily miisa telo hita faty tao amin’ny Reniranon’i Onive tao Ampitatafika distrikan’Antanifotsy ny 31 mey taorian’ny nisamborana azy tany Ambohimahasoa ny 21 mey lasa teo
Rivo Rakotovao « Manahirana io vidin-tsolika io »
Vita ny tatitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI), andrasana ny fampidinana vidin-tsolika. Araka ny fanamby nataon`ny filohan`ny Repoblika, tsy maintsy hahena ny vidin-tsolika ary efa nanaiky izany ireo mpandraharaha, hoy ny minisitry ny vola Randriamandranto Richard.
Hamboarina sy hatsaraina ny fonja any Nosy lava amin’izao fotoana izao. Isan’ny fanambin’i Andry Rajoelina ny fananganana fonja manara-penitra.
Katsahana hamonjana ireo tompondakan’ny afera maloto eto amin’ny firenena, toy ny mpaka an-keriny na mpanao « kidnapping » sy ny mpanao aferana boaderozy, mpanao kolikoly avo lenta izy io, raha ny sombim-baovao vonjimaika azo. Ireo rehetra hadihadian’ny PAC (Pôle Anti-Corruption) ka voamarina fa nanao kolikoly ka helohin’ny fitsarana sy ireo nohelohin’ny Tribonaly manokana momba ny boaderozy izany no havantana halefa any, raha ny ritsoka re. Nosy kely iray any amin’ny faritra avaratra andrefan’i Madagasikara i Nosy lava ary ny tena nampalaza sy nahafantarana azy farany dia tany no nanagadrana ireo mpanao fihetsiketsehana tamin’ny taona 1972.Efa nanomboka ny taona 1911 anefa ity nosy ity no nampiasain’ny mpanjanan-tany hanaovana sesitany sy hihazonana ireo gadra nampanaovina asa an-terivozona.Ary taty aoriana dia mbola nametrahana ireo olo-meloka nosokajiana ho gaigy lahy, ny taona 2000 no nakatona ny fonjan’i Nosy Lava ary nafindra tao Analalava ireo gadra tao ; nisy kosa anefa ireo najanona tany an-toerana natao ho mpiambina ny tanàna.Ankehitriny izany dia mety ho velomina indray ny fonjan’i Nosy lava ka hametrahana ireo mpanao trafikana boaderozy sy ny mpaka an-keriny.Zavatra roa izay raha tena hanaovana fanadihadiana lalina sy maharitra dia mety ho maro ihany ny olona, eny hatramina manampahefana aza ho voasambotra sy ho gadraina ; raha tena miasa anatin’ny fahaleovantena tokoa ny fitsarana.Efa ireny nivoaka ireny ohatra ny ampamoaka nataon’i Eddy Maminirina na Eddy boaderozy momba an’ireo olona ambarany fa mpiaro azy sy nomeny fanomezana, izay misy manamboninahitra ambony. Raha ny fotoana nisian’ny fanondranana andramena nanenjehana an’i Eddy Maminirina rahateo, dia tamin’ny andron’ny tetezamita nitondran-dRajoelina amin’ny ankapobeny. Lava dia lava ny lisitra navoakan’ny Praiminisitra teo aloha Jean Omer Beriziky mahakasika izany ary misy anarana maro ao, saingy tsy hita popoka moa io lisitra io .